जब भखरै बिहे गरेकी नवबिबाहित दुलहीले सोच्नै नसक्ने कार्य गरेपछि सबै चकित परे ! – List Khabar
Home / समाचार / जब भखरै बिहे गरेकी नवबिबाहित दुलहीले सोच्नै नसक्ने कार्य गरेपछि सबै चकित परे !
जब भखरै बिहे गरेकी नवबिबाहित दुलहीले सोच्नै नसक्ने कार्य गरेपछि सबै चकित परे !
admin December 31, 2021 समाचार Leaveacomment 144 Views
एजेन्सी । विश्वमा कस्ता–कस्ता घटनाहरु हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । नेपालमा त यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन । आज हामी तपाई चकित पर्ने एक घटनाको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं ।
के तपाईले कहिलै सुन्नु भएको छ जुन पण्डितले नब जोडिको विवाह गरायो उसैले केही दिनपछि तिनै बेहुलीसँग विवाह गर्यो । हामी ढुक्कसँग भन्न सक्छौं यो तपाईले यो भन्दा पहिले कहिल्लै सुन्नु भएको वा देख्नु भएको छैन । सामान्यतया विवाहपछि केटा वा केटी अर्को केटा वा केटीसँग गएको घटनाहरु हुन्छन् । केही दिन पहिले छोरालाई भनेर ल्याएकी बुहारीसँग ससुराले विवाह गरेको खबर पनि आएको थियो । अलिक दिन पहिले ज्वाँईसँग सासु गएको खबर आएको थियो ।
अहिले पण्डितले बेहुली भगाएको खबर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा भाइरल भएको छ । यो घटना मध्यप्रदेश सिरोंजको टोरी बागरोद गाउँमा यस्तै अनौठो घटना देखिएको हो । यहाँ एक २१ वर्षीय युवतीको विवाह गंजबासौदा नजिकै स्थित आसट गाँउ निवासी एक युवकसँग मे ७ मा विवाह भएको थियो ।
यस विवाहमा टोरी बागरोद मन्दिरका पुजारी विनोद शर्माले गराएका थिए । विवाह पछि जन्तीलाई विदा पठाइयो तर विवाहको तीन दिनपछि युवत्ती फर्केर माइतीमा नै आईन् ।
मे २३ मा माइती घरका सबै अर्को एकजनको विवाहमा गएको समयमा ती युवत्ती तिनै पण्डित विनोदसँग भागेको खबर सार्वजनिक भयो । प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार ति युवत्ती १ लाख ५० हजार भारतीय रुपैंयाँ बराबरको गरगहना र ३० हजार (भारु) साथमा लिएर भागेकी छिन् ।
उनलाई दाइजोको रुपमा मिलेको मध्यमा उनले गरगहना र पैसा लिएर भागिन् । परिवार पक्षले प्रहरीमा उजुरी दिएको छ, अहिले दुवई जनाको खोजिकार्य भइरहेको छ ।
स्थानीयका अनुसार ती युवत्ती लिएर भाग्ने पण्डितको विवाह भइसकेको छ । उनका तीन सन्तान पनि रहेका छन तर अहिले सबै वेपत्ता भएका छन् । पण्डित र ति युवत्तीको प्रेम २ वर्ष पुरानो भएको रहस्य खुल्न आएको छ ।
Previous डब्लूएचओले दियो चेतावनी अब फेरी सबै बन्द हुनै पर्ने
Next केटि मान्छेहरु कस्ता केटाहरुलाइ मन पराउछन् ? केटाहरुले अवश्य पढ्नुहोला…..
काठमाडौँ– रामबाबु गुरुङको निर्देशनमा बनेको चलचित्र ‘कबड्डी ४ द फाइनल म्याच’ ले ओपनिङमै कीर्तिमान रचेको …